Gibts guutinsa bishaanii Hidha Haaromsaarratti ejjennoon qabatte sarara diimaa Ityoophiyaa kan darbe – Fana Broadcasting Corporate
Gibts guutinsa bishaanii Hidha Haaromsaarratti ejjennoon qabatte sarara diimaa Ityoophiyaa kan darbe
Finfinnee, Fulbaana 27, 2012 (FBC) –Gibts guutinsa bishaanii Hidha Haaromsaarratti ejjennoon qabatte sarara diimaa Ityoophiyaa kan darbe jedhe Ministeerri Bishaan Jallisii fi Inarjii FDRI.
Ejjennoon biyyattiin qabatte faayidaa Ityoophiyaa dabarsee kan laatu waan ta’eef, waliigalteerra ga’uun hin danda’amne jedhan ministeerichatti gorsaan lageen daangaa fi daangaa qaxxaamuranii obbo Tafarraa Bayyanaan.
Waajjirri Mana Maree Qindeessaa Hirmaannaa Ummataa Hidha Haaromsaa har’a qooda fudhattoota waliin dhimma hidhichaarratti mari’ateera.
Waltajjichaan sadarkaa ijaarsa hidhichaa fi tumsa waloo biyyoota yaa’a gadaanurratti mari’atameera
Obbo Tafarraa Bayyanaan marii biyyoota sadee Ityoophiyaa, Sudaanii fi Gibtsirratti ibsa laataniiru.
Gibts waggaa waggaadhan bishaan meetir kiyuubiin biiliyoonni 40 akka gadhiifamuuf, bishaan Hidha Aaswaan ol ka’iinsa galaanaa olii meetira 165 irra yoo ga’u Ityoophiyaan bishaan gadhiisuu qabdi, akkasumas qaamni mariisisaa 3ffaan nu jidduu yaa galu yaada jedhu dhiyeessiteetti.
Ejjennoon Gibts kun dhimma walabummaa Ityoophiyaatti bu’uu waan ta’eef fudhatama hin qabu jedhan.
Gibts waltajjii Kaartuumirratti yaadolii waliigalteerra ga’uun hin danda’amin hedduu kaasaa turteetti.
Ityoophiyaan yaada dhiyessiteen; hidhichi sadarkaa sadi’iin bishaanin akka guutamu, tarbaayinoonni 2 haalduree tokko malee hojii akka eegalchiifaman yaada jedhuun waliigalamus, Gibts garuu yaadni ani dhiyeesse fudhatama guutuu yoo hin argatin qabo yaa’ichi hin qabamu jechuushee ibsaniiru.
Yaadni biyyattiiin dhiyeessite dhaloota ammaa qofarratti osoo hin taane, kan dhufurrattis dhiibbaa qaba.
Ityoophiyaan dhimmi hidhichaa ajandaa siyaasaa keessaa ba’ee amma marii teeknikaa ta’etti biyyattii waliin ni mari’atti.
Hoji raawwachiisaan hidhichaa Injiinar Kiflee Horroon gama isaanitiin ijaarsi hidhichaa %68.56 irra ga’uu ibsaniiru.
Tarbaayinoonni lamaan anniisaa maddisiisuu akka eegalan hojjetamaa jiraachuun eerameera.
Waajjirri Mana Maree Qindeessaa Hirmaannaa Ummataa Hidha Haaromsaa bara baajataa darbe galii boondii fi biroorraa hawaasarraa Birrii miiliyoona dhibba 9 fi miiliyoona 70 sassaabuusaa beeksiseera.
Ityoophiyaa fi Afrikaan Kibbaa damee qonnaa irratti waliin hojjechuuf waliigalan